I-NASCAR ikhetha i-AWS njenge-Cloud Computing ekhethwayo, i-Cloud Machine Learning, ne-Cloud Artificial Intelligence Provider - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Ukudilizwa kokuqukethwe » Audio » I-NASCAR ikhetha i-AWS njenge-Cloud Computing ekhethwayo, i-Cloud Machine Learning, ne-Cloud Artificial Intelligence Provider
I-DAYTONA BEACH, FL - FEBRUARY 11: UB Brad Keselowski, umshayeli we- #2 Miller Lite Ford, uhola iphakethe lemoto ngesikhathi seMonster Energy NASCAR Cup Series I-Advance Auto Parts Clash e-Daytona International Speedway ngoFebhuwari 11, 2018 eSttona Beach, eFlorida . (Isithombe nguSean Gardner / Getty Images)
I-NASCAR ithuthukisa isipiliyoni se-fan, ishesha imizamo yokuhlakanipha, futhi ithuthukisa ukusebenza okusebenzayo by ukuphazamisa ifu
USTONTONA BEACH, FL - FEBRUARY 11: UBrad Keselowski, umshayeli we #2 UMiller Lite Ford, uhola iphakethe lemoto ngesikhathi seMonster Energy NASCAR Cup Series I-Advance Auto Parts Clash e-Daytona International Speedway ngoFebhuwari 11, 2018 eSttona Beach, eFlorida. (Isithombe nguSean Gardner / Getty Images)
SEATTLE-Juni 4, 2019-Namuhla, Amazon Web Services, Inc. (AWS), i Amazon.com inkampani (i-NASDAQ: i-AMZN), yamemezela ukuthi iNational Association for Auto Car Racing Racing (NASCAR) ikhethe i-AWS njengendlela ejwayelekile yokufunda umshini okusekelwe emafini kanye nemithwalo yomsebenzi wokuhlakanipha. I-NASCAR izosebenzisa ububanzi nokujula kobuchwepheshe be-AWS ukwakha amasevisi asekelwe emafini nokuzenzekelayo izinqubo, kufaka phakathi uchungechunge olusha lwevidiyo NASCAR.com esibizwa Lo Mzuzu kumlando we-NASCAR inikwe amandla yi-AWS. Uchungechunge lwevidiyo luzoqala ukungena emncintiswaneni we-Monster Energy NASCAR Cup Series ™ eMichigan International Speedway, ukwabelana ngezikhathi zomlando omkhulu kunazo zonke emidlalweni ye-NASCAR nababukeli. I-NASCAR idlulisela ingobo yomlando ye-18-petabyte ku-AWS, futhi izosebenzisa i-Amazon Rekognition-isevisi ye-AWS eneza ukuhlaziywa kwesithombe nokuhlaziywa kwamavidiyo ezinkampanini zokusebenza-ukubeka ngokuzenzekelayo ozimele zevidiyo ezihambisana nemethadatha, njengomshayeli, imoto, ubuhlanga, isikhathi, kanye nabaxhasi ukuze bakwazi ukucinga kalula lawo mathegi ukuze afinyelele izikhathi ezimnandi kakhulu ezivela emidlalweni eyedlule. Ngokusebenzisa amasevisi ka-AWS, i-NASCAR ilindele ukulondoloza izinkulungwane zamahora wokusesha ibhukwana ngonyaka, futhi izokwazi ukubeka kalula ama-flashbacks afana no-Dale Earnhardt Sr. sika-1987 "Phuma Ehlathini" noma isiphetho sesithombe se-2016 Daytona 500 sikaDenny Hamlin, futhi ngokushesha ulethe lokhu kubalandeli ngevidiyo kliphu NASCAR.com neziteshi zenhlalo yomphakathi.
I-NASCAR izosebenzisa izinsiza ze-AWS ukuthuthukisa uhla lwazo olugcwele lwezimpahla zabezindaba kufaka phakathi amawebhusayithi, izinhlelo zokusebenza zeselula, kanye nezakhiwo zomphakathi kubalandeli be-80 million emhlabeni wonke. I-NASCAR ihlela ukusebenzisa i-Amazon SageMaker ukuqeqesha amamodeli ajulile okufunda ngokumelene neminyaka engu-70 yemidwebo yomlando yokuthuthukisa imethadatha nama-analytics wevidiyo. Nge-Amazon Transcribe, insizakalo ye-ASR) yokutholwa kwenkulumo, i-NASCAR izokwazi ukufaka amazwibela kanye nesitembu sesikhathi zonke amagama okukhuluma ngaphakathi kwamavidiyo asobo yomlando ukuze abakhiqizi bevidiyo be-NASCAR bakwazi ukuthola kalula imifanekiso yomthombo ngokuseshwa kombhalo. Ngaphezu kwalokho, i-NASCAR izosebenzisa i-AWS Media Services, kuhlanganise ne-AWS Elemental MediaLive ne-AWS Elemental MediaStore, ukusekela i-NASCAR Drive, ebeka abalandeli esihlalweni somshayeli besebenzisa amakhamera emoto, bukhoma umsindo, namabhodi wabaphambili abaphilayo. Lawa ma-AWS Media Services anika amandla i-NASCAR ukucubungula, ukupakisha, nokugcina okuqukethwe kokusakazwa kwevidyo, kufaka phakathi izinhlanga ezibukhoma, ukulethwa kokusabalalisa kanye nabalingani bomkhakha.
"Ukusheshisa nokusebenza kahle kuyisihluthulelo ekugijimeni nasebhizinisi yingakho sakhetha i-AWS-ifu ngokungasebenzi okungalinganiselwe, isethi yezinsiza eziningi, futhi ijubane elisheshayo emisha-ukusheshisa ukuthuthela kwethu efwini," kusho uCraig Neeb, Iphini likaMongameli oPhethe we-Innovation and Development, NASCAR. "Ukwehlisa i-AWS ukusekela uchungechunge olusha lwevidiyo lunikeza abalandeli bethu abathintekayo ukuthi babukeke ngokomlando emidlalweni yethu ngenkathi behlinzeka ngokubamba iqhaza emiphumeleni yokuqala yalokhu kusebenzisana okuthakazelisayo."
"Iminyaka engu-20 yama-Amazon yomsebenzi wokufunda komshini, kanye nama-analytics ethu abanzi namakhono okufunda umshini, isenza sikhethweni esingcono kakhulu ezinhlanganweni ezifuna ukusebenzisa imishini ukuthola ulwazi emininingwaneni yazo futhi zakha amazinga amasha okuzibandakanya namakhasimende abo," kusho UMike Clayville, uMongameli we-Worldwide Commercial Sales ku-AWS. "I-NASCAR isebenzisa ubuchwepheshe befu ukuze kuthuthukiswe indlela abantu abayithola ngayo le midlalo nokuletha okuqukethwe okungathinta nakakhulu kubalandeli. Iphothifoliyo engalinganiselwe yezinsizakalo zefu ihlinzeka nge-NASCAR amathuluzi aguquguqukayo futhi anamandla okuletha izakhi ezintsha zezemidlalo ukuze ziphile ngokusakazwa kwezinhlanga. "
Ngeminyaka ye-13, ama-Amazon Web Services yiyona yesikhulumi sezwe samafu kakhulu esiphezulu futhi esamukelekile. I-AWS inikezela ngezinsizakalo ze-165 ngokugcwele ngokufaka ama-compute, isitoreji, ama-database, ama-networking, ama-analytics, ama-robotics, ukufundwa komshini nokuhlakanipha okufakelwayo (I-AI), i-intanethi yezinto (i-IoT), iselula, ukuphepha, i-hybridi, ngokoqobo kanye ne-augmented reality (VR ne-AR ), imithombo yezindaba, nokuthuthukiswa kohlelo lokusebenza, ukuthunyelwa kanye nokuphathwa okuvela ezindaweni ze-66 Ukutholakala (AZs) ezindaweni eziphakathi kwe-21, ehlanganisa i-US, i-Australia, iBrazil, eCanada, eChina, eFrance, eJalimane, esifundeni saseHong Kong Special Administrative, eNdiya, e-Ireland, Japan, Korea, Singapore, eSweden nase-UK. Izigidi zamakhasimende-kuhlanganise nokuqalisa okusheshayo okukhulayo, amabhizinisi amakhulu, nokuhola ama-ejensi kahulumeni-athemba i-AWS ukuqinisa ingqalasizinda yabo, ibe yinkimbinkimbi kakhulu, nezindleko eziphansi. Ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-AWS, vakashela aws.amazon.com.
Ama-Amazon aqondiswa yimigomo emine: ukukhathazeka kwamakhasimende kunokugxila komncintiswano, intshisekelo yokuqalwa, ukuzibophezela ekusebenzeni okuhle, nokucabanga kwesikhathi eside. Izibuyekezo ze-Google Play manje zisebenzisa i-Google + ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. Izibuyekezo ezintsha zixhunyaniswa ngokusesidlangalaleni kuphrofayeli yakho ye-Google +. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Ukuze uthole olunye ulwazi, vakashela amazon.com/about bese ulandela @AmazonNews.
I-National Association ye-Auto Car Auto Racing, Inc. (NASCAR) iyilungu lesigwebo se-No. 1 ifomu lezemoto e-United States. I-NASCAR iqukethe uchungechunge lwesithathu lukazwelonke (i-Monster Energy NASCAR Cup Series ™, i-NASCAR Xfinity Series ™, ne-NASCAR Gander Outdoors Truck Series ™), uchungechunge lwesithathu lwesifunda, uchungechunge olulodwa lwendawo lwendawo, uchungechunge lwezizwe ezintathu kanye ne-Automobile Racing Club of America (ARCA) . I-International Motor Sports Association ™ (i-IMSA®) ilawula i-IMSA WeatherTech SportsCar Championship ™, uchungechunge lwemidlalo yezemidlalo yaseSouth America. Isekelwe e-Daytona Beach, Fla., Namahhovisi emadolobheni angu-8 eNyakatho Melika, ama-NASCAR amacala angaphezu kwezigidi ze-1,200 ezingaphezu kwe-30 US, i-Canada, iMexico ne-Europe. Ukuze uthole olunye ulwazi vakashela www.NASCAR.com futhi www.IMSA.com, bese ulandela i-NASCAR Facebook, Twitter, Instagram, no-Snapchat ('i-NASCAR').
Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe CES2017 I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor I-MStar SJGolden - SoftAtHome I-SoftAtHome, i-MStar, i-CES2017 I-TVU Izinethiwekhi I-Ultra HD Forum Umlingisi wevidiyo esingokoqobo virtual	2019-06-04
Ngaphambilini: I-Dejero isekela iHologram Yomuntu Yezwe Lokuqala nge-5G eRomanian Rock Concert
Olandelayo: I-Lectrosonics Izisa uhlelo lwe-D Squared Digital Wireless System System